ရုပ်သံလိုင်းသော induction furnace အဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုထားသောအရည်ပျော်နေသောမီးဖို, ရှိပါတယ်a50 ၏စုစုပေါင်းကျင်းပနိုင်ရန်စွမ်းရည် t နှင့်အသုံးဝင်သော
သွန်းလောင်း-40 အလေးချိန်ချွတ် t အများဆုံး. အရည်ပျော်ကျခြင်းစွမ်းအားကိုတပ်ဆင်ထားသည့် inductors လေးခုမှထုတ်လုပ်သည် at အပေါ်သတ်မှတ်ထားသောထောင့်
နှင့်အတူမီးဖိုကြမ်းပြင်aစုစုပေါင်းချိတ်ဆက်ထားသောဝန် ၃၄၀၀ kW. တစ်ခုချင်းစီကိုထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆင်ရေးများအတွက်တစ်ခုချင်းစီကို inductors သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုတ်ထရန်စဖော်မာ.
In အ အဖြစ်အပျက် တ ဦး တည်း induction ၏ပျက်ကွက်၏, အခြားသူများကိုပူဖနောင့်ကိုင်ထားပါ at အဆိုပါပျက်ယွင်းနေ induktor နေစဉ်အပူချိန်
အစားထိုးခံရ. မီးဖိုသည်နောက်တဖန်ထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်aကာလ 12 နာရီ. သွန်းသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်
သွန်းလောင်း ထွက် မီးဖိုဆောင်သောစပါးနှင့်လွှဲပြောင်းနိုင်ပါတယ် at သုည gradient သို့ အဆိုပါကိုင်ပြီးမီးဖို at အ မှုနှုန်း4၏ t/h. အဆိုပါကျင်းပနိုင်ရန်-နှင့်-သတ္တုများပုံသွန်းမီးဖိုကိုလည်းမီးဖိုဖြစ်စေသောစပါးမှတဆင့်အရည်ပျော်လက်ခံခဲ့သည်. ဤသည်သတ္တုနိုင်ပါတယ် သို့ ပြန်လာပါ သို့ လိုအပ်လျှင်အရည်ပျော်မီးဖို at သုည gradient.
inductor ဝန်ဆောင်မှုဘဝနှင့် အစားထိုး အချိန်
အဆိုပါ ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝ တစ်ခု induction တပ်ဆင်ထားသောစွမ်းရည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်, အ အမျိုးအစား အအေးပေးစနစ်, ချန်နယ်၏ပုံသဏ္.ာန်, နှင့်ကြွေထည်အမျိုးအစား။ ဝန်ဆောင်မှု ရက်ပေါင်း ၂၅၀ ၏ဘဝများသည်လေထုအတွက်သတင်းပို့သည်-အအေး inductors အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော at ၁၀.၅၂ kW, ဒါပေမယ့်သာ 100 400 kW သတ်မှတ်ချက်များအတွက်ရက်ပေါင်း. In နှစ်ခုလုံး အမှုပေါင်း, သတ္တု throughput ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1,600 ဖြစ်ခဲ့သည် t လူမီနီယံ.4
အအေးတိုးတက်အောင်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ အကျိုး ကြွေထည်အမျိုးအစား ၄၀၀ အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်-kW inductors ရန် မှီ ၏ဘဝအချက်များ
ရက်ပေါင်း 250 နှင့် ပိုပြီး2သတ္တု throughputs,500 t/inductors. သို့သျောလညျး, ဝန်ဆောင်မှုသာ 100 နေ့ရက်များလည်းဖြစ်ကြသည် မသိဘူး. နောက်ထပ်လည်ပတ်စက်ရုံ အစီရင်ခံစာများ ဝန်ဆောင်မှုဘဝ အချက်များ 15 ၏-27 လများ.
ပိုမိုမြင့်မား inductors 900 kW ၏သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ပိုပြီးလိုလားသူနှင့်အတူduction နှုန်းထားများ 30 ၏ tတစ်ရက်လျှင်တစ်ရက်လျှင် induction, ညွှန်ကြားချက်လိုအပ်
စီးဆင်းမှု သတ္တု နှင့်ပြင်းထန်သောအအေး, ရှိ မဟုတ် သေးအချိန်မဆိုအရှည်များအတွက်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်. ကန ဦး အတွေ့အကြုံကပြသခဲ့သည် ထို စွမ်းအင်စီးဆင်းမှု အကြောင်းတရားများ အတွက်တိုက်စားမှု ဒေါင်လိုက် လိုင်းများ.
ပင် ကသော်လည်း မဟုတ် လိုအပ်သော သို့ အဆိုပါလိုင်းများကိုစင်ကြယ်စေ လိုချင်သော ဝန်ဆောင်မှု ဘဝ အဆိုပါ induction ခဲ့ လျှော့ချ။ သားမွေးther တိုးတက်မှုများကိုညွှန်ကြားချက်ကိုနှေးကွေးစေခြင်းဖြစ်သည် စီးဆင်း ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်aပိုမိုတည်ငြိမ်သော ရေ အအေး
စနစ်, သော မျှော်လင့်ချက်ပေးသည် ဘို့ ဝန်ဆောင်မှုဘဝရရှိခြင်း အချက်များ 12 ၏ လများ အမြင့်-ပါဝါ inductors.
• တိုက်ရိုက်-အပူမီးဖို (ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေနံ-ပစ်ခတ်) အပူပြန်လည်နာလန်ထူအဆောက်အ ဦ များနှင့်အတူ
• induction melting furnaces, channel သို့မဟုတ် crucible type.
လက်ရှိလောင်စာဆီထောက်ပံ့မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လိုအပ်သည် သို့ re-၎င်း၏အနာဂတ်ရရှိနိုင်မှုအကဲဖြတ်. It is သို့ မျှော်လင့်ထား ထို လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေတက်လာရင်လည်းပါလာမယ် an အစားထိုးစွမ်းအင်၏စျေးနှုန်းအတွက်တိုး- လျှပ်စစ်မီး- အမှု၌ထင် ရ be ပေးထား
အခြားအရာအားလုံးထက် သို့ အစားထိုးစွမ်းအင်၏ပုံစံအကောင်းဆုံးအသုံးချ။ ဒီမှာ, ထို induction မီးဖိုကမ်းလှမ်း a
မြင့်တက်အလုပ်သမား ကုန်ကျစရိတ်များ စက်မှုနိုင်ငံများနှင့်မြင့်မားသောသတ္တုစျေးနှုန်းများကျွန်တော်တို့ကို oblige သို့ ပင်နိမ့် remelt-တန်း, အလင်း-အပိုင်းအစ gauge နှင့် သို့ အလုပ်အကိုင်ပေးaဘယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်များယူနစ်အရည်ပျော် ထို အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်များ စွမ်းအင်သည်နိမ့်သည် ကုန်ကျစရိတ်များဆုံးရှုံးမှုအရည်ပျော်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အလုပ်သမား ကုန်ကျစရိတ်များ။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား နည်းပညာများ Tags: အလူမီနီသော induction မီးဖို, လူမီနီယံအရည်ပျော်, အလူမီနီအရည်ပျော်မီးဖိုထဲ, အလူမီနီအရည်ပျော်မီးဖိုစျေးနှုန်း, အလူမီနီရောစပ်, အလူမီနီမီးဖိုထဲ, လူမီနီယံမီးစက်ကိုဝယ်, သော induction လူမီနီယံမီးဖိုထဲ, သော induction အရည်ပျော်လူမီနီယမ်, induction အရည်ပျော်မီးဖို, လူမီနီယမ်မီးဖို induction smelting, လူမီနီယံအပိုင်းအစအရည်ပျော် post navigation